हतियारधारी समूहद्वारा लुटपाट- प्रदेश २ - कान्तिपुर समाचार
डरले इत्रिएर बसिरहँदा परबाट अँध्यारोमा एउटा आकृति आफूतिर आउँदै गरेको देखेँ । नीलीकाली भएँ । बस्दा पनि भुक्लुक्कै ढल्छुजस्तो लाग्यो । मर्न हिँडेको म आफ्नो ज्यानको मायाले हुरुक्कै भएँ । आकृति बिस्तारै–बिस्तारै मेरोनजिकै आयो । आकृति, आकृति मात्रै थिएन । साक्षात् भगवान पो थियो मलाई बचाउन आएको ! काका रैछन् । नजिकै आएर भने, ‘नानी यति राति किन यहाँ आएको ? के भयो ? हिँड घर । म त्यतै जान लाको ।’
यत्ति वाक्यले म पग्लिएँ । बेस्सरी रोएँ हजुरको काखमा मुन्टो घुसारेर । हजुरलाई दिएको दुख्खले मनमनै पीडा भयो । बा हजुरले आफैँले लौराले हानेर दुखाएको ठाउँमा आफैँले तेल मालिस गर्दै हुनुहुन्थ्यो । अघिसम्मको मेरो वितृष्णा एकै झोक्कामा